Ngo "Snickers" wrapper entsha - abalambayo
Isikhangiso, Igama lomkhiqizo
A sefilosofi omkhulu wake wathi, "Uyazi -. Musa wena, uma elambile" Yiqiniso, le nkulumo ingeyona ifilosofi brand "Snickers". Futhi manje lezi Amabha candy Uyi wrapper amasha angenza chaza ukuthi uthola, uma ulambile.
Umqondisi sha, "Snickers" Wathi: "Sihlala sifuna izindlela ezintsha ukuze ukuheha amakhasimende bazi futhi athande lolu inkampani. Sikholelwa ukuthi imigoqo entsha wrapper ngeke usinga abantu, hhayi nje ukuzimisela okusheshayo izimpawu zabo indlala ingayala ukususwa kwabo, kodwa ngeke futhi abanike indlela entsha futhi kumnandi ukukhombisa abangani bakho, umndeni kanye nabathandekayo, njengoba nje kuvamile namanje lapho ihlushwa ukulamba. "
Ingqikithi yalo wrappers entsha
Nokho, nemishayo entsha wrapper manje ukunikeza abantu indlela entsha ukuthuka nomunye. Yebo, amnandi okunama-kilojoule amaningi ibha kususa umuzwa indlala, kodwa ilingana Umbhalo kuso usala. Uhlu izici ezilotshwe wrappers okusha zifaka 21 izwi ahlukahlukene "oqumbile", "ukuyaluza," "whiner" nokunye.
Yiqiniso, lokhu kuyinto hambisa ezithakazelisayo, kodwa ekwenzeni lokho okuhleliwe akulona umxhwele - kubonakala sengathi umthwalo umsebenzi project nje ngeke bame izwi elilukhuni eyodwa, usifake idokhumenti ye-Microsoft Word futhi usebenzise yonke omqondofana wamthembisa. Kunoma ikuphi, lezi zikhangiso ihloselwe ngokukhethekile intsha bayothenga candy amabha umklamo omusha ukuba bahlekise ngayo, abangane bakho. Kodwa uma kungenjalo kokubili umqondo kanye nokuqaliswa kwalo ikude kokuba ezingeni eliphezulu kakhulu. Yiqiniso, sisenalo ukubona. kanjani lokhu kwakwenqatshelwe kuzothinta ezingeni yokuthengisa, futhi kuphela ngaleso sikhathi kuyoba kungenzeka ukuba yahlulele impumelelo isinqumo yenkampani kuphromoshini ezinjalo. Yiqiniso, ukuze nidonse ukunaka nomkhiqizo ukudumisa igama lakhe kuyisici esibalulekile kakhulu, kodwa kukhona abanye imingcele.
Ubuhlungu ngesikhathi sokukhulelwa
Svetlana Kuznetsova: ithenisi, umkhaya, impilo siqu nokuzilibazisa
Amagama Vampire kwabesilisa nabesifazane
Yimali lenkampani - lena inkomba eyinhloko ukusebenza imisebenzi yayo